Isu soo baxa Dirt: Ciyaarta Tartanka Linux ee Jidka Oo Kaliya | Laga soo bilaabo Linux
Luigys toro | | Ciyaaraha
Anigu ma isticmaalo Linux sababtoo ah ma jiraan wax ciyaaro ah oo ka socda nidaamkaas hawlgalka ah!, tani shaki la’aan waa mid ka mid ah weedhaha aan inta badan maqalno sida kuweena isku dayaya inay dad cusub ku soo biiraan adduunka cajiibka ah ee Linux iyo barnaamijyada bilaashka ah, mana xuma in la dhagaysto maxaa yeelay waxaan aqoonsanahay cilladaha ay Linux wali ku leedahay mid ka mid ah meelaha ugu badan soo jiita dadka isticmaala kombuyuutarka. Hadda, maalin kasta qaddar ah ciyaaraha lagu ordi karo nidaamkayaga hawlgalka bilaashka ah oo bixiya waxqabad weyn, shaqadu way yara yaraan kartaa, laakiin tartiib tartiib ayay u maraysaa waddo dheer.
Nidaamkan ku darista ciyaaro cusub oo la jaan qaadaya Linux, oo bixiyay inta ugu badan waa Steam, oo hadda na siiya suurtagalnimada inaan ku raaxeysanno Dirt Rally ee Linux, oo leh muuqaallo wanaagsan, waxqabad sare iyo wixii ka sarreeya dhammaantood oo leh gameplay aad u qabatimo.
1 Waa maxay Rally Dirt?
2 Astaamaha iyo dib u eegista Dirt Rally ee Linux
3 Sidee loo iibsadaa Rally Dirt?
Waa maxay Rally Dirt?
Waa a ciyaarta tartanka taasi oo ku wareegsan dhacdooyinka duullaanka, taas oo ciyaartoydu fursad u leeyihiin inay ku tartamaan dhacdooyinka waqtigooda wata ee wata gawaarida cajiibka ah labadaba waddooyinka laamiga ah iyo dhul leh xaalado cimilo aad u adag. Waxay leedahay gawaari isdaba joog ah, raadad iyo qaabab ciyaar, oo aad iskula jaanqaadeyso inta aad ka guuleysaneyso tijaabooyinka murugsan ee laguu xilsaaray.
Naqshadeynta iyo dhaqaajinta ciyaarta waxay ciyaartoydeeda ka dhigeysaa inay ku raaxeystaan ​​dareen la mid ah xaaladaha dhabta ah, wuxuu yiri ciyaarta sidoo kale waxay la jaan qaadi kartaa kontaroolada bannaanka ee u shaqeeya sida isteerinka isteerinka, baaldelada, kabaalka kuwa kale.
Ciyaartan waxaa asal ahaan loo soo saaray Windows-ka markii dambena waxaa loo qaybiyey barnaamijyo kale sida PlayStation 4, Xbox One iyo kuwa cusub oo dhowaan loogu talagalay nidaamka hawlgalka Linux.
Astaamaha iyo dib u eegista Dirt Rally ee Linux
Tani quruxsan oo xiiso leh ciyaarta tartanka loogu talagalay Linux Waxay ahayd mid aad u soo dhaweysay bulshada guud ahaan, taas oo xaalado badan u leexatay dhanka Windows si ay ugu raaxeysato, laakiin hadda waxay awood u yeelan doontaa inay ku wada cunto dhammaan qaababka waxqabad xamaasad leh.
Waxyaabaha ay tahay in lagu xisaabtamo marka lagu raaxeysto Dirt Rally ee Linux, waa nasiib daro waa inaan la kulannaa astaamaha qalabka qaarkood si aan u awoodno inaan socodsiino, midka aan u arko inuu ugu adag yahay in la fuliyo waa kaarka fiidiyowga ee kan ka sarreeya kan NVIDIA 650ti 1GB (runtii qaar badan oo ka mid ah qalabka hadda jira waxay la kulmaan dhibaato la'aan), laakiin markaa waxaan sidoo kale u baahanahay qiyaastii 8 gb wan.
Dirt Rally waxay na siisaa dhowr nooc oo ciyaarta ah, oo ka bilaabma tartamada isu soo baxa ilaa tartamada isku soo baxa adag, si la mid ah, waxay na siineysaa suurtagalnimada tartamo badan oo kaladuwan, Fun?
Hagaag, inaad si qoto dheer ugu dhaadhacdo astaamaha, waxqabadka iyo ciyaarta ciyaarta waxaan arki karnaa fiidiyowyada soo socda, oo aan hubo inaad jeclaan doontid.
Sidee loo iibsadaa Rally Dirt?
Dirt Rally waa ciyaar ka qiimo badan $ 30, taas oo shaki la'aan bixisa astaamo badan oo si cad u caddaynaya qiimaheeda ganacsi. Si aad u iibsato ciyaarta waxaad ku sameyn kartaa labadaba dukaan uumiga sidii dukaanka oo kale wasakh.
Waxaa xusid mudan in lagu ciyaaro Dirt Rally ee Linux waa inaan Steam ku rakibnaa, tan awgeed waxaad la socon kartaa qaar ka mid ah casharradii la sameeyay halkan ku qoran baloogga.
Waxaan kaliya rajeyneynaa inay ku raaxeysan karaan ciyaartan weyn iyo in badan oo sii soconaya inay yimaadaan, si loo jabiyo caqabadaha ka horjoogsanaya Linux miiska inuu noqdo mid caan ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Ciyaaraha » Dirt Rally: Ciyaaraha tartanka Linux ee intaas oo dhan ah xanaaqa
Ciyaar qurux badan!
Haa qurux badan.
Ku jawaab tomeu
Maqaal aad u wanaagsan, qorraxda. Xaqiiqdii waa ciyaar weyn, mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee aan ku aragnay nidaamkeena shaki la'aan. Intaa waxaa dheer, waxqabadka ayaa si la yaab leh u fiican, ku dhowaad wuxuu la mid yahay nooca Windows, nidaamka laga soo dejiyay. Anaga JugandoEnLinux.com waxaan u hibeynay falanqeyn si cadaalad ah u balaaran dhowaan. Haddii aad ka fiirsaneyso inaad u iibsato ciyaartan nidaamkeena waxaad ka arki kartaa xiriirkan: